Dr. Tint Swe's Writings: Political colors နိုင်ငံရေးအရောင်များ
နိုင်ငံရေးပါတီတွေက သတ်သတ်မှတ်မှတ်သုံးကြတဲ့အရောင်တွေရှိတယ်။ တရားဝင်ရော အဲဒီသဘောမဟုတ်တာရော။ နိုင်ငံတွေမှာ ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ကိုယ်ရှိပြီး မတူကြပါ။ အများစုက သဘောညီ သတ်မှတ်ထားတာလည်းရှိတယ်။ တရောင်ကို တမျိုးစီယူဆတာလည်းရှိတယ်။ ဥပမာ အနီရောင်ဟာ လက်ဝဲအယူအဆကိုကိုယ်စားပြုတယ်လို့ အများကသတ်မှတ်ထားတယ်။ Red Flag, Red Army, Red Scare လို့အထင်အရှားရှိတယ်။ အဲတာက ၁၉ဝဝ ကျော်ကတည်းက ဖြစ်တယ်။
၂၁ ရာစုထဲရောက်တော့ အနီရောင်ကို လက်ဝဲနဲ့ကင်းလွတ်ပြီး ယူသုံးလာတယ်။ အထင်ရှားဆုံးက (၁) ရှေးရိုးစွဲ အမေရိကန် ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီ၊ (၂) ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရှပ်နီ-ရှပ်ဝါအားပြိုင်မှုနဲ့ (၃)၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနီနဲ့ အစိမ်း။
၁။ Black အနက်
Anarchism မင်းမဲ့အယူအဆကိနေယူသုံးထားတယ်။ Islamic State of Iraq and the Levant အကြမ်းဖက် အစ္ဓလမ် အစွန်းရောက်အဖွဲ့ကလည်း အနက်ပဲ။ ဂျာမဏီနဲ့ သြစတြေီးယားတွေမှာ ခရစ်ယန်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက သုံးတယ်။ အီတလီမှာ ဖက်ဆစ်စပါတီ။ ဂရိမှာ လက်ယာစွန်းပါတီ။ ရုရှားမှာ ဘုရင်ဖက်တော်သားတွေကသုံးတယ်။
၂။ Blue အပြာရောင်
အများအားဖြင့် အစဉ်အလာစွဲကြီးတဲ့သူတွေကသုံးတယ်။ ယူကေနိုင်ငံမှာ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ။ ကုလသမဂ္ဂအရောင်က အပြာနုရောင်။ ယူအက်စ်မှာတော့ ၂ဝဝဝ ခုနှစ်ကတည်းက ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကို မီဒီယာကနေ ပေးထားတဲ့အရောင်။ ၂ဝ၁ဝ ရောက်မှ တရားဝင် အပြာရောင်လိုဂို သတ်မှတ်ပါတယ်။ ယူအက်စ်မှာပဲ အလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှုကလည်း အပြာရောင်ပဲသုံးတယ်။ ဥပမာ Blue collar workers ကော်လာပြာလုပ်သား။ အပြာရောင်ခပ်ဖြော့ဖြော့ဟာ ဂျူးဝါဒ ဖြစ်တယ်။ အစ္စရေးလ်အလံရောင်ကြည့်ပါ။ တောင်အာဖရိကမှာ လစ်ဘရယ်နဲ့ လက်ဝဲယိမ်းပါတီကသုံးတယ်။ အိန္ဒိယမှာ Dalit movement ဒါးလစ်လှုပ်ရှားမှုက အပြာရောင်သုံးတယ်။ တရုပ်ပြည်နဲ့ တိုင်ဝမ်မှာ Kuomintang (KMT) ကူမင်တန်ပါတီက အပြာရောင်။ တရုပ်ကွန်မြူနစ်ပါတီက အနီရောင်။ သြစတြီးယားမှာ လက်ယာယိမ်းပေါ်ပြူလစ်ပါတီ Freedom Party of Austria (FPÖ) ကအပြာသုံးတယ်။
၄။ Brown အညိုရောင်
Nazism နာဇီအရောင်ဖြစ်တယ်။ Sturmabteilung (SA) ဆိုတာ ဘရောင်းရှပ်ကိုခေါ်တယ်။
၅။ Buff ဝါညိုရောင်
ဗြိတိသျှမှာ Whig faction က အရင်တုံးကသုံးတယ်။
၆။ Grey မီးခိုးရောင်
ပင်စင်စားတွေကသုံးတယ်။ ဆံပင်ဖြူတာကို Grey hair လို့ခေါ်တယ်။
၇။ Green အစိမ်းရောင်
Green parties ဂရင်းပါတီတွေရှိတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဦးစားပေးပါတီတွေဖြစ်ကြတယ်။ အိုင်းရစ် အမျိုးသားရေးနဲ့ အိုင်းရစ် ရီပတ်ဘလီကန်တွေကသုံးတယ်။ အမေရိကမှာ ၁၈၉ဝ တုံးက စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ပေါ်ပြူလစ်ပါတီကသုံးခဲ့တယ်။ သြစတေးလျမှ အမျိုးသားပါတီကသုံးတယ်။ အစိမ်းရောင်ဟာ အစ္စလမ်ဘာသာမှာ အထွတ်အမြတ်အရောင်ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကယူသုံးတယ်။
၈။ Orange လိမ်မော်ရောင်
Christian democrats ခရစ်ယန်ဒီမိုကရက်အရောင်ဖြစ်တယ်။ သြတြီးယား၊ ဂျာမဏီ၊ ပြင်သစ်၊ ဖင်လန်၊ ရိုမေးနီးယား၊ ဟန်ဂေရီ၊ ဆလိုဗားကီးယား၊ ချက်နဲ့ တူရကီ။ ကနေဒါမှာ New Democratic Party (NDP) ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်ပါတီက သုံးတယ်။ မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်မှာ Unionism နဲ့ Orange Order တွေကသုံးတယ်။ နယ်သာလန်မှာ Dutch People's Party for Freedom and Democracy ပါတီရဲ့ ဒုတိယအရောင်ဖြစ်တယ်။
၉။ Pink ပန်းရောင်
ပြင်သစ်နဲ့ ပေါ်တူကီမှာ ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တွေကသုံးတယ်။ အနီရောင်ကနေ ပြော့လာတဲ့သဘောဆောင်တယ်။
၁ဝ။ Purple ခရမ်းရောင်
သတ်သတ်မှတ်မှတ် ယူသုံးတာနည်းတယ်။ Feminism ဣတ္တိလိင်အယူအဆကသုံးတယ်။
၁၁။ Red အနီရောင်
အစဉ်အလာအားဖြင့် ကွန်မြူနစ်နဲ့ ဆိုရှယ်လစ်အရောင်ဖြစ်တယ်။ အရင်းရှင်တွေစုပ်တဲ့ အလုပ်သမားသွေးလို့ ဘာသာပြန်တယ်။ ၁၈၄၈ ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးမှာ အနီရောင်အလံကိုသုံးခဲ့တယ်။ ယူကေ၊ သြစတေးလျနဲ့ နယူးဇီလန်မှာ အလုပ်သမားအရေးကသုံးတယ်။ အယူအဆ ပြောင်းပြန်လို့ပြောရပါမယ်။ ကနေဒါမှာတော့ Liberal Party of Canada လစ်ဘရယ်ပါတီကသုံးတယ်။ အမေရိကမှာတော့ ၂ဝဝဝ ခုနှစ်ကတည်းက Republican Party ရီပတ်ဘလီကင်ပါတီက သုံးတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ NLD အတွက်ဖြစ်လာတယ်။
၁၂။ Saffron နနွင်းရောင်
အိန္ဒိယမှာ ရိုးရာအစဉ်အလာ ဟင်ဒူအမျိုးသားရေးဝါဒကသုံးတယ်။ ၂ဝဝ၇ မြန်မာပြည်က သံဃာလှုပ်ရှားမှုကို နိုင်ငံတကာမီဒီယာကသုံးတယ်။
၁၃။ Yellow အဝါရောင်
လစ်ဘရယ်အယူအဆလို့ဆိုပါတယ်။ ဂျာမဏီ၊ ရိုမေးနီးယား၊ အက်စတိုးနီးယား၊ ယူကေတို့မှာသုံးတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ နီပေါမှာ ဘုရင်စနစ်လိုလားသူတွေကသုံးတယ်။
၁၄။ White အဖြူရောင်
Surrender flag လက်နက်ချတဲ့အလံရောင်ဖြစ်တယ်။ စင်္ကာပူမှာ People's Action Party ပါတီကသုံးတယ်။
စွယ်စုံကျမ်းတွေမှာ မပါတဲ့အရောင်တခုက မြန်မာပြည်မှာပဲရှိတယ်။ ညစ်ထေးတဲ့အရောင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။
Vote for Child labor ကလေးအလုပ်သမားများအတွက် မဲပေးပ...
Paracetamol and pregnancy (ပါရာစီတမော) နဲ့ ကိုယ်ဝန...
Hot air balloon catches fire မီးလောင်သွားတဲ့ သတ်ပံ...
Uneven playing field အင်ဂျင်နီယာအမှားနဲ့ သင်္ချာအမှာ...
Lessons during election campaign အမေစုကို ချစ်အုံး...
Green or Red for better night vision အစိမ်းနဲ့ အနီ...
Corruption Perceptions Index အကတိလိုက်စာမှုညွှန်းကိန...